China PAM-cationic Polyacrylamide ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပံ့ပိုးသူများ | သန့်ရှင်းသောရေ
ဖုန်းနံပါတ်: 86-510-87976997 / 0086 13861515998
Yixing Cleanwater Chemicals Co. , Ltd.
ရေ Decoloring အေးဂျင့်
Paint Fog သည်ခဲ
Formaldehyde- အခမဲ့ Fixing အေးဂျင့်
အရောင် Fixing အေးဂျင့်
PAM-cationic Polyacrylamide သည်စက်မှုလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးနှင့်မိလ္လာကုသမှုအမျိုးမျိုးတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။
၎င်းပစ္စည်းသည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောဓာတုပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အော်ဂဲနစ်ပျော်ရည်အများစုတွင်ပျော်ဝင်မှုမရှိခြင်း၊ ကောင်းမွန်သော flocculating လုပ်ဆောင်မှုနှင့်အရည်ကြားရှိပွတ်တိုက်မှုခံနိုင်ရည်ကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ ဒါဟာနှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများ, အမှုန့်နှင့် emulsion ရှိပါတယ်။
၃။ စက္ကူခြောက်သွေ့ခြင်းနှင့်စိုစွတ်သောအစွမ်းသတ္တိကိုတိုးတက်စေရန်နှင့်စက္ကူခြောက်သွေ့။ စိုစွတ်သောစွမ်းအားကိုတိုးတက်စေရန်နှင့်အမျှင်များနှင့်ဖြည့်စွက်ခြင်းများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်စက္ကူပြုလုပ်ရာတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများ - သကြားလုပ်ငန်း
အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများ - ဆေးဝါးစက်မှုလုပ်ငန်း
အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများ - ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း
အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများ - ငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်း
အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများ - စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း
၁။ အလွယ်တကူဖျက်နိုင်၊ အချိန် ၄၀ မိနစ်ပျော်
3. မြင့်မားသောမော်လီကျူး, မော်လီကျူးအလေးချိန် 10 သန်း
White Fine- သဲ
၁၅ သန်း - ၂၅ သန်း
မှတ်ချက်။ ။ သင်၏ထုတ်ကုန်ကိုသင်၏အထူးတောင်းဆိုချက်အရပြုလုပ်နိုင်သည်။
၁။ ၀.၁% ပါဝင်သည်။ (အစိုင်အခဲပါ ၀ င်မှုအပေါ် မူတည်၍) ရောစပ်သင့်သည်။ ကြားနေ (သို့) ပျက်စီးသွားသောရေကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ပိုကောင်းသည်။
ဖြေရှင်းချက်ကိုလုပ်သည့်အခါ 2. ထုတ်ကုန်ကိုအများအားဖြင့်အပူချိန် ၅၀-၆၀ between အကြားရှိရေနှင့်အတူအညီအမျှပြန့်ကျဲနေသင့်သည်။
ရေ၌ emulsion dilut သည့်အခါက emulsion အတွက်ပိုလီမာဟိုင်ဒရိုကိုရေနှင့်လုံလောက်သောထိတွေ့နှင့်လျင်မြန်စွာရေ၌ပြန့်နှံ့စေရန်အလျင်အမြန်နှိုးဆော်ထင်နေသည်။ ဖျက်သိမ်းချိန်ပတ်ပတ်လည် 3-15 မိနစ်ခန့်ဖြစ်ပါတယ်။
အထုပ်: 25L, 200L, 1000L ပလပ်စတစ်စည်။
သိုလှောင်ခြင်း: emulsion ၏သိုလှောင်ထားသည့်အပူချိန်မှာ ၀.၃၅ between အကြားဖြစ်သည်။ အထွေထွေ emulsion6လသိမ်းဆည်းထားသည်။ သိုလှောင်မှုအချိန်ကြာမြင့်စွာအခါ, emulsion ၏အပေါ်ဆုံးအလွှာပေါ်တွင်အပ်နှံထားသောရေနံအလွှာရှိလိမ့်မည်ကြောင့်ပုံမှန်ပါပဲ။ ဤအချိန်တွင်ရေနံအဆင့်ကိုစက်မှုလှုံ့ဆော်မှု၊ စုပ်စက်လည်ပတ်မှုသို့မဟုတ်နိုက်ထရိုဂျင်လှုံ့ဆော်မှုတို့ဖြင့် emulsion သို့ပြန်ပို့သင့်သည်။ အဆိုပါ emulsion ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုထိခိုက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အဆိုပါ emulsion ရေထက်နိမ့်သောအပူချိန်မှာအေးခဲ။ အေးခဲပြီးသောအခါအေးခဲသော emulsion ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းစွမ်းဆောင်ရည်သည်သိသိသာသာပြောင်းလဲလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်၎င်းကိုရေဖြင့်ရောစပ်လိုက်သောအခါ anti-phase surfactant အချို့ကိုရေထဲသို့ထည့်ရန်လိုအပ်နိုင်သည်။၎င်းကို ၆ လသိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်။ သိုလှောင်မှုအချိန်ကြာမြင့်သောအခါအထက်ပိုင်းတွင်ဆီသိုလှောင်ထားသောအလွှာရှိလိမ့်မည်
အထုပ် - အစိုင်အခဲထုတ်ကုန်ကိုအတွင်းပိုင်းပလပ်စတစ်အိတ်များနှင့် ၂၅ ကီလိုဂရမ်ပါသည့်အိတ်တစ်ခုစီပါ ၀ င်သည့် polypropylene ရက်အိတ်ထဲတွင်ထည့်နိုင်သည်။
သိမ်းဆည်းခြင်း ၃၅ below အောက် below ခြောက်သွေ့။ အေးသောနေရာ၌တံဆိပ်ခတ်သိမ်းဆည်းထားသင့်သည်။
ရှေ့သို့ PAM-Anionic Polyacrylamide
နောက်တစ်ခု: PAC-PolyAluminum ကလိုရိုက်